Archive du 20190131
Antenimieram-pirenena Hiakatra ny maripana …
Nanomboka omaly alarobia 30 janoary tamin`ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany teo anivon`ny`parlemantera roa tonta.
Madagasikara Mikorisa mankany amina filoha Mpanjaka ?
Nanao fanambarana mahakasika ny fiainam-pirenena ny SEFAFI na Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena.
Initiative Emergence Madagascar Inona no tena ao ambadika ?
Ny IEM (Initiative Emergence Madagascar) dia sehatra manambatra hevitra sy tetikasa ara-pandrosoana an’i Madagasikara napetraky ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina nialoha ny nirotsahany hofidiana tamin’ny febroary 2018.
Fomba fiaina gaboraraka Mampihisatra ny fandrosoana
Tena zatra miaina ao anatin’ny gaboraraka sy sarotra entina ny Malagasy, ka io no fanovana lehibe mila hapetraka voalohany, raha tena tiana ny hitondra ny firenena any amin’ny fampandrosoana sy fandrosoana.
Fitrandrahana mila sorona ao Mahereza Fampihorohoroana vahoaka, hoy ny ben’ny tanàna
Mampalahelo ny zava-misy ao amin’ny kaominina izay hiadidiako, hoy ny ben’ny tanàna ao amin’ny kaominina ambanivohitra Mahereza, Jhonny Rakotoarisoa.
Loza mitranga isa-kerinandro Mahalasa saina
Taona hamokatra be ity 2019 ity, hoy ny mpanandro, Eris Rabedaoro. Be atao izy mahery setra be io satria sarotra be ilay lohany. Be ny maty.
Lalam-pirenena FAHA-7 Sokatra sy Soavalindriaka, tra-tehaka tao Antanifotsy
Sokatra velona valo sy Soavalindriaka na «hippocampes “ milanja 6 Kg no tra-tehaky ny “Brigade Police des Routes” Ambatolampy, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena eo amin’ny Toby Andrefanambohijanahary.
Edito Miandry ilay tena fanavotana
Miezaka maneho ny maha akaiky ny vahoaka azy faran’izay zokiny ny filoham-pirenena ankehitriny. Fiteniny matetika moa ny hoe hanampy ny vahoaka sy ny hoe hanavotra an’i Madagasikara.
Tanora mpianatra Malagasy Maro no tafaroboka amin’ny fifohana sigara
Ny 100%-n’ireo sekoly nanaovan’ny fikambanana NY SAHY fanadihadiana dia ahitana mpivarotra daholo ny 100 metatra manodidina.
Tanora Malagasy Vitsy no liana amin`ny taranja siantifika sy teknika
Miha latsa-danja ny fironan`ny mpianatra amin`ny taranja siantifika sy teknika.
NOVONOINA HO FATY
Novonoina ho faty ilay renim-pianakaviana miasa amin’ny orinasa afaka haba etsy Ambatomaro rehefa tsy nisy vola azo nalaina teny aminy.
Fakana na famindrana taova Tsy vita maimaika fa mandalo dingana maro
Nahoraka be teto amintsika tato ho ato ny resaka halatra taova. Nanomboka tamin’ny fisian’ireo ankizy nisy naka an-keriny na very teto an-drenivohitra ka hatramin’izao
Sakafo maimaimpoana ho an’ny mpianatry ny EPP Faritra 4 no hisantarana azy
Hahazo sakafo maimaimpoana avokoa ireo mpianatra eny anivon’ny sekoly ambaratonga fototra manomboka izao.
Fironan’ny Malagasy amin’ny asa tena Misy akony ratsy amin’ny toekarena
Maro be amin’izao ny Malagasy miroboka amin’ny asa tena. Vitsy koa moa ny orinasa mandray mpiasa kanefa betsaka ihany koa ireo tsy te hiditra anaty orinasa fotsiny izao.